चिनियाँ राजदूत यान्छी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच गोप्य भेटवार्ता, के विषयमा भयो छलफल ? « Lokpath
२०७७, ३ माघ शनिवार ११:०३
चिनियाँ राजदूत यान्छी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच गोप्य भेटवार्ता, के विषयमा भयो छलफल ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ३ माघ शनिवार ११:०३
काठमाडौं । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मर्यादा क्रम मिच्दै फेरि एकपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेकी छन् । हिजो(शुक्रवार) साँझ उनी शितलनिवास पुगी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेकी हुन् ।
भेटमा नेकपा विभाजनको अवस्थाबारे छलफल भएको बुझिएको छ । उनले नेकपा कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर समेत परामर्श गरिएको बुझिएको छ ।
साँझ साँढे ५ बजे शितलनिवासमा प्रवेश गरेकी यान्छी ८ बजेपछी मात्र निस्किइन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटउपर संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भइरहेको बेला यान्छीको सक्रियता ह्वात्तै बढेको देखिन्छ जसले चिनियाँ हस्तक्षेप ठाडै भएको भान हुन थालेको छ ।
संसद पुनःस्थापना भए नेकपा मिल्ने सम्भावना भएको निर्क्यौल निकाल्दै सोही अनुसार चिनियाँ रणनीति बनेको बुझिएको छ ।
उता निर्वाचन आयोगले चाँडै नै सूर्य चिन्ह र नेकपाको वैधानिकता कुन समूहलाई दिने बारे निर्णय दिनु पर्नेछ ।
राजदूत यान्छी ओली समुहले सूर्य चिन्ह पाउने हो कि भनी पनि चिन्तित रहेको पाइएको छ। ओली समूहले सूर्य चिन्ह नपाओस् भने पनि यान्छीले अदालतले आज संसद विघटनसम्बन्धी बृहत पूर्ण इजलाश नगई भई संवैधानिक इजलाशमै सुनुवाई हुने परमादेश पनि आज जारी भएको छ ।
यससँगै चिनियाँ राजदूत यान्छी अदालतको फैसलामा दखल दिन सकिन्छ कि भनी अन्तिम कसरतस्वरूप फेरि सक्रिय भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाली राजनीतिमा खुल्लेआम सक्रियता देखाईरहेको चीनले कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपमन्त्री गुओ यचौको नेतृत्वमा गत महिना टोली पठाएको थियो । उक्त टोलीले नेकपा मिलाउन पहल गरेको थियो । चीनबाट गोप्य रुपमा तीन सदस्यीय टोली सडकमार्ग हुँदै छिरेको थियो । चिनियाँ टोली नेकपा मिलाउने उपायसहित भित्री रुपमा निकै सक्रिय भइरहेको छ ।
नेता महतोको प्रश्न -आफ्नो अधिकार मागेका थारु नेतालाई जेल हुँदा १७ हजारको ज्यान लिनेलाई के ?
धनगढी । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले थारुहरुलाई भोट बैंकका